Ukuvikelwa sabantu kanye nokuvuselelwa anikezwa Russian Social Insurance Fund.
Inkampani ngamunye ngaphakathi Russian Federation okhokhela iminikelo yabo abasebenzi. Ngakho kukhona ukunqwabelana izimali. Ukuze ukhokhele iminikelo yabo, lo somabhizinisi wabonisa yakhe siqu umshwalense inombolo yokubhalisa, okuyinto ngokuqinile yaklonyeliswa FSS.
Kusukela Isikhwama zikhokhelwa abazali futhi ikhokhelwe izinzuzo ezinkulu ngenxa sokukhubazeka yesikhashana. Indlela ukwazi Inombolo yokubhaliswa we oVikelwe ku FSS?
FSS oVikelwe - ngubani?
Uma amarekhodi usomabhizinisi abasebenzi ngokusemthethweni ezikhishwe iholo uba oVikelwe. Phela, ngokomthetho, zonke amabhizinisi akhiqiza noma yiziphi izinkokhelo eqondiswa abantu kwakudingeka bayobhalisa i-Social Insurance eSikhwameni seKhomishani zingakapheli izinsuku ezingu-10 kusukela mzuzwana umsebenzi wokuqala esiqashiwe. Noma ubani ongabhalisiwe, uzokhokha esingathí sina isigwebo lemali.
Yamalungu kukhona ngokusemthethweni:
izinhlangano ukuthi babe ne-akhawunti zamanje kanye nokulinganisela ekhokhwa njalo ngenyanga ukuze abantu ethile;
notaries, abaseshi noma abameli abanale esisemthethweni umsebenzi wenkontileka nabantu ukwenza umsebenzi futhi wamukele inkokhelo ekupheleni nemisebenzi yabo;
amapulazi, umsebenzi okungase akhiwa ibhizinisi.
Pholisi sithembisa ukukhokhela umshwalense kulesi sikhwama. Futhi kumelwe sokunikela nokuziphendulela ku FSS esikhathini esithile. Manje imibiko ingathunyelwa ku-elekthronikhi esikhundleni kokuba bame emigqeni bese ukuchitha isikhathi sakho. Nokho, cabangela elekthronikhi kuvunyelwe kuphela kulabo izinhlangano, lapho isibalo sezisebenzi abantu abangaphezu kuka-25 ngesikhathi sokukhokha.
Indlela bobunjwa ekhatsi FSS?
Okuqukethwe in the FSS lula, nje imibhalo embalwa:
Uyatholakala izivumelwano umshwalense zabasebenzi nabasebenzi kanye bafundzi emakhophi emsebenti izincwadi zabo.
Amakhophi esitifiketini sokubhalisa ibhizinisi kanye isitifiketi kusukela intela ku isitatimende nokubhaliswa inhlangano engokomthetho.
Lowo Mbhalo wangonyaka we ebhange (isitatimende), eqinisekisa khona akhawunti yamanje.
Thumela inombolo kamazisi siqu (idokhumenti iza imeyili) emva kwesikhashana. Kodwa uma libanjwa ngokushesha (noma ukulahleka kwedatha), kulula ukwenza.
Abanye bayazibuza ukuthi kungani sidinga inombolo yokubhaliswa kwesamba? FSS eRussia sibonga lezi zinombolo yokubhalisa kungaba ukuqapha imisebenzi yazo zonke izinhlangano kwezohwebo. Okungukuthi ngemibiko ngekota (Ifomu 4-FSS) kanye nesikhathi izinkokhelo. Ngaphandle lesi sikhwama ngeke bakwazi ukunakekela yokutakula futhi ukukhokhela izinzuzo.
Uma usomabhizinisi uyekile ukusebenza, kufanele ngempela ukwazisa Isikhwama zisuswe irejista.
Indlela ukwazi Inombolo yokubhaliswa we oVikelwe ku FSS?
Inombolo yokubhalisa is ebalulwe ikholomu ethile uma nithatha izitatimende, kanye lapho kudingeka ukudweba isisebenzi leaf ukukhubazeka. Uma umshwalense ibhalisiwe, kumele wazi idatha yayo. Kunezindlela eziningana ukuze uthole inombolo.
Kulula kakhulu ukuthatha isitatimende esisemthethweni ukuze intela. Noma, njengoba ebizela othile inombolo yakho yocingo ku intela yakho emva ucacise inombolo yakho ye-VAT. Kanye enkathini yesimanje digital ikuvumela ukuba bafunde ukwaziswa okudingekile ngokusebenzisa inethiwekhi Inthanethi. ngokushesha kakhulu ukuthola inombolo yokubhaliswa FSS INN. Abantu abaningi bayakukholelwa lokho.
Indlela yokuthola ulwazi ngokusebenzisa i-Internet?
Kuphi ukuthola inombolo yokubhaliswa insured ku FSS? Kuyinto ngokwanele ukuba uvakashela isayithi (egrul.nalog.ru) futhi zikhiphe isitatimende elektroniki, ngemva kokufaka inhlangano babelwe BIN.
Kodwa kukhona esinye ngendlela elula. Ungathola inamba yokubhaliswa FSS INN. Usomabhizinisi kuziwa website esemthethweni Social Insurance Fund, search futhi uhlelo ukuqapha wethula INN enhlanganweni yabo ithola ngemizuzwana yedatha edingekayo. nombuzo ewindini lihlotshiswe kakhulu ukumane futhi abekho okhiye esengeziwe noma yini enye, udinga cha.
Nokho wazi kanjani inombolo yokubhaliswa insured ku FSS i-Internet? Kusayithi efanayo eyodwa inganquma isitatimende electronic. Lesi sitatimende kuyinto mahhala, kodwa ukwakheka kuzothatha cishe amahora angu-24.
Sokuqonda FSS izinombolo
Yiziphi izinombolo 10 ezisohlwini inombolo yocingo? Lezi zibalo akuthathiwe ophahleni, ngalinye limelela into. okungukuthi:
4 izinombolo zokuqala encode yigatsha lendawo i-Social Insurance Fund, lapho ibhizinisi;
6 Landela-up - it is a ikhodi siqu kwenhlangano.
Ikhodi washintsha kuphela uma inkampani eshintsha ikheli layo lomthetho.
Pholisi unemtfwalo egcwele ukulethwa izitatimende. Ngakho-ke, usomabhizinisi kufanele baqonde indlela ukwazi ngenombolo yokubhaliswa kwesamba e-Social Insurance Fund uma kulahleka.
Ngo-Windows 10 akawuvuli "Qala": yini okufanele uyenze?